I-GNOME ikhankanya ukufika kwe-GNOME 41 kwinqaku layo leveki | Ubunlog
IGNOME ikhankanya ukufika kwe-GNOME 41 kwinqaku layo kule veki kunye nohlaziyo kwiiapps ezinje ngeKooha 2.0.0
IPablinux | 25/09/2021 11:13 | gnome, Ubuntu
Kule veki, iprojekthi esemva kwedesika esetyenziswa luhlobo olukhulu lwe-Ubuntu kunye neFedora, phakathi kwabanye, ibhengeze Ukukhutshwa kweGNOME 41. Ekuboneni kokuqala, akubalulekanga njengohlaziyo njenge-v40, eyazisa ukuthinta iphedi yokuchukumisa, kodwa wonke umntu ozamile uyavuma ukuba ukusebenza kuphucula kakhulu. Njengoko kulindelwe, yinto abayikhankanyileyo kwifayile ye- Inqaku lale veki malunga neendaba ezizayo okanye esele zifikile kwiplanethi GNOME.
Kodwa, ukuthatha ukujonga okukhawulezayo okokuqala kuyo, eyona nto ibambe ingqalelo yam lelona candelo likulo IKooha 2.0.0, hayi kakhulu ngenxa yolwazi olunikezwe yi-GNOME nangenxa yoluhlu lweendaba esizibonayo xa singena Iprojekthi yeprojekthi yeGitHub. Phakathi kwezinye izinto, ngoku ixhasa iifomathi ze-MP4 kunye ne-GIF kwaye ikuvumela ukuba urekhode iwindow ethile okanye i-desktop.
Yintoni entsha kwihlabathi le-GNOME
I-GNOME 41 ngoku iyafumaneka, kunye nophuculo olunje ngobumanzi obukhulu.
I-libadwaita kunye ne-libhandy ngoku bane-API yokunxibelelana nokukhethwa kwendlela emnyama phakathi kwedesktops.
I-Metronome ifikile kwi-GNOME Circle.
Inguqulelo ye-Metadata Cleaner 2.0.0 sele ikhutshiwe. Olu luhlaziyo olukhulu olubandakanya ujongano lomsebenzisi olutsha olwakhiwe nge-GTK4 kunye ne-libadwaita, inkqubo entsha yokunceda, kunye neseti epheleleyo yeenguqulelo ezintsha nezihlaziyiweyo.
I-Déjà Dup 43.alpha sele ikhutshiwe, kunye nenkxaso yeMicrosoft OneDrive, inkxaso enokuvavanywa ngokuzikhethela yesixhobo sokugcina iRestic, kunye nohlaziyo lomsebenzisi ngokubanzi.
Ukwabelana ngeaudio, usetyenziso olutsha lokwabelana ngeaudiyo njengeRTSP. Kungalunga, kodwa ndizamile kule veki kwaye khange isebenze kum ...
Random inenguqulo 0.9 kwiFlathub. Le nguqulo izisa iinguqulelo ezisebenzayo kwiilwimi ezi-2, kunye neempawu zeenguqulelo zangaphambili.
Kwaye olu lutshintsho olwenzekileyo kule veki ngeenxa zonke ze-GNOME. Kule veki izayo sinethemba elingcono.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Iidesika » gnome » IGNOME ikhankanya ukufika kwe-GNOME 41 kwinqaku layo kule veki kunye nohlaziyo kwiiapps ezinje ngeKooha 2.0.0
I-FreeTube, umxhasi we-Youtube kwidesktop ka-Ubuntu
Inguqulelo entsha yeSamba 4.15.0 sele ikhutshiwe, iza nenkxaso ye-SMB3, uphuculo nokunye okuninzi